တင်းကိတ်လှပလွန်း တဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အပီအပြင်မြင်ရအောင် တကိုယ်လုံးကိုဒွန့်ပြလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
တင်းကိတ်လှပလွန်း တဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အပီအပြင်မြင်ရအောင် တကိုယ်လုံးကိုဒွန့်ပြလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး
မင်း သမီး ချောလေး ဘေဘီမောင် က တော့ အောင်မြင် နေ တဲ့ သရုပ် ဆောင် တွေ ထဲမှာ တစ် ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ် ပြီး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် မှု တွေ ကို အပြည့် အဝ ရရှိ နေတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … . ။ သူမ ဟာ မော်လ်ဒယ်လ် တစ် ယောက် အနေ နဲ့ အနု ပညာ လော က ထဲကို စတင် ဝင် ရောက် လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ကြိုး စား အားထုတ် မှု တွေ ကြောင့် ပရိသတ် အသိ အမှတ် ပြု တဲ့ မင်းသမီး တစ်လက် လည်း ဖြစ်နေ ပြီ ဖြစ်ပါ တယ် နော် … . ။
ဘေဘီမောင် ဟာ အဆို တော် သားဂန်း နဲ့ လည်း ကြည်နူး စရာ ကောင်းတဲ့ relationship တစ်ခု ကိုတည်ထောင် ထားတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကလည်း သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာ သတင်း လေး ကို စောင့်နေ ကြ တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဘေဘီမောင် ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေ အပြင် တစ်ဖက်မှာ လည်းစီးပွားရေး လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပြီး အထည် ဆိုင် ဖွင့်ထား တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ် နော်..။
ဘေဘီ ဟာ အလုပ် တွေနဲ့ မအား မလပ် လုပ်နေ ရ ပေမယ့် အားလပ်ချိန် လေး မှာတော့ Til Tok လေး ဆော့ကာ ပရိသတ် တွေ အတွက် တင်ပေးလာ ခဲ့ ပါ တယ်..။ ဘေဘီ ဟာ သူမ ရဲ့ Tik Tok acc လေး မှာ အမိုက် စား ကကွက်တွေ နဲ့အပီ အပြင် ကနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မကြာသေးမီ က တင်ပေး ထားခဲ့ တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ကဲ…. ပရိ သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါ တယ် နော် . … ။
photo credit : Baby Maung’s facebook acc
မင္း သမီး ေခ်ာေလး ေဘဘီေမာင္ က ေတာ့ ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေတြ ထဲမွာ တစ္ ေယာက္ အပါ အဝင္ ျဖစ္ ၿပီး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ မႈ ေတြ ကို အျပည့္ အဝ ရရွိ ေနတဲ့ သူေလးပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … . ။ သူမ ဟာ ေမာ္လ္ဒယ္လ္ တစ္ ေယာက္ အေန နဲ႔ အႏု ပညာ ေလာ က ထဲကို စတင္ ဝင္ ေရာက္ လာခဲ့ တာ ျဖစ္ ၿပီး ႀကိဳး စား အားထုတ္ မႈ ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ အသိ အမွတ္ ျပဳ တဲ့ မင္းသမီး တစ္လက္ လည္း ျဖစ္ေန ၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … . ။
ေဘဘီေမာင္ ဟာ အဆို ေတာ္ သားဂန္း နဲ႔ လည္း ၾကည္ႏူး စရာ ေကာင္းတဲ့ relationship တစ္ခု ကိုတည္ေထာင္ ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြ ကလည္း သူတို႔ ႏွစ္ဦးရဲ့ မဂၤလာ သတင္း ေလး ကို ေစာင့္ေန ၾက တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ေဘဘီေမာင္ ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ အျပင္ တစ္ဖက္မွာ လည္းစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ ေနတာ ျဖစ္ၿပီး အထည္ ဆိုင္ ဖြင့္ထား တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္..။
ေဘဘီ ဟာ အလုပ္ ေတြနဲ႔ မအား မလပ္ လုပ္ေန ရ ေပမယ့္ အားလပ္ခ်ိန္ ေလး မွာေတာ့ Til Tok ေလး ေဆာ့ကာ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ တင္ေပးလာ ခဲ့ ပါ တယ္..။ ေဘဘီ ဟာ သူမ ရဲ့ Tik Tok acc ေလး မွာ အမိုက္ စား ကကြက္ေတြ နဲ႔အပီ အျပင္ ကေနတဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို မၾကာေသးမီ က တင္ေပး ထားခဲ့ တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ကဲ…. ပရိ သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ . … ။